2.1 Talo waxbarasho
Waxaa jira habab kala duwan oo loo barto aqoonta xisaabta. Maaddaama ay dadku kala duwan yihiin, ma jiro qaab la isku raacsan yahay oo dadka oo dhan ka dhexeeya. Halkaan waxaan ku soo gudbinaynaa talooyin ay bixinayaan barayaal xisaabeed oo khibrad leh:
Si aad horumar uga gaarto barashada xisaabta, waa in aad u aragto xisaabta wax wanaagsan. Xataa haddii ay marmar kugu adkaato ama ku dhibto waa inaadan lumin xiisaha xisaabta. Barashada xisaabtu waxay inta badan u baahan tahay dadaal dheeraad ah, sidaa darteed waxaa lagaaga baahan yahay rajo wanaagsan iyo adkaysi badan.
Barashada xisaabtu waxay u baahantahay waqti. Sida ugu wanaagsani waa in aad si degan oo xiiso leh u joogtaysaa waqtiga barashada xisaabta. Iska ilaali in waqtigu kula dheeraado adigoo dib u dhiganaya hawsha kuu taal. Waxaa wanaagsan in aad waqtiga si isle’eg koorsada ugu qaybiso.
Raadi intii aad caawinaad heli kartid. Ka sokow baraha (macallinka), waxaa ku caawin kara qaraabada iyo saaxiibada. Ha ka baqin in aad su’aasho, ama ka xishooto inaadan wax fahmin. Muddada waxbarashadu socoto, qofna laga filimaayo inuu wax walba yaqaan. Waxaa kale oo caawinaad laga heli karaa ”Internet”ka sida bogagga ”Internet”ka ama goloyaasha dooda. Waxaad kaloo ogaataa, marka laga reebo buuggaaga xisaabta, inay jiraan buugaag kale oo fara badan oo ka hadlaya xisaabta aad barato.
Wax ka baro khaladaadkaada. Had iyo jeer isku day inaad baarto shaqada aad qabatay, wakhti dheeraad ahna sii meelaha aad ku liidato.
Uqor jawaabaha, mas’alooyinka layliyada si cad oo bayaan ah. In aad u xaliso mas’alooyinka si tartiib ah, halkii aad ka degdegi lahayd, waxay yaraynaysaa khaladaadkaada. Waxay kaloo taasi u fududaynaysaa adiga iyo kuwa kaleba in aad dib u eegtaan jawaabaha. Xisaabtu ma aha oo keliya in aad heshid jawaab sax ah ee waa in aad sidoo kale si cad usoo bandhigtaa sida aad u fekertay.